Mamaky fady: Rehefa ny vehivavy iharan’ny fanorisorenana no mahazo tsiny · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Avrily 2018 13:38 GMT
(Marihana fa efa tamin'ny volana Novambra taona 2010 ny lahatsoratra teny Anglisy)
Notontosaina tao Kairo ny andiany faharoa amin'ny atrikasa momba ny tetikasa Mamaky Fady izay nokarakarain'ny ekipan'i Nazra, ary tamin'izany fotoana izany, nanohy nanoratra momba ny fady ara-tsosialy ao Ejypta ireo bilaogera nandray anjara tamin'ny atrikasa voalohany. Eo ambanin'ny lohateny hoe “Ny haromotana ara-nofo”, namoaka lahatsoratra ilay bilaogeran'ny Freedom Fighter, nijery ny sasantsasany tamin'ny fanorisorenana ara-nofo izay nitranga tamin'ny voalohandohan'ny volana Oktobra, raha nankalaza ny fetin'ny Silamo (Eid) ny olona. Naharay vaovao ratsy izy rehefa niverina tany Kairo avy niatrika fanofanana tany Londra:
زي عادة كل عيد تحرشات جماعية وهجوم جماعي على بنات غلبانة قرروا لحظهم السيء انهم يخرجوا يروحوا وسط البلد أو أي جنينة يحتفلوا بالعيد ويتفسحوا عشان يجيلهم حبة حثالة أو مرضى غلبانين يتحرشوا بيهم مع انهم مش لابسين عريان ولا نيلة حجة أي متخلف متحرش مريض منهم .. وطبعا الأمن مقدرش على السعرانين
Toy ny mahazatra, fanorisorenana ara-nofo lehibe mihatra amin'ireo tovovavy izay nivoaka hankalaza ny Eid any afovoan-tanàna na any amin'ny valan-javaboary izany, lehilahy mikivanivany na marary saina sasantsasany no nanorisory azy ireo ara-nofo, na dia tsy nanao akanjo mihanjakanjaka aza izy ireo, izay matetika filazan'ny olona tsy mivoatra manao izany …. Ary mazava ho azy, tsy afaka manakana ireo “haromotana ara-nofo” ny filaminana …
Nanjary zava-niseho mahazatra tao Kairo isaky ny Eid ny fanorisorenana ara-nofo, ary mateti-pitranga ao afovoan-tanànan'i Cairo izay misy tovolahy sy tovovavy an-jatony mandeha any amin'ny trano fijerena sarimihetsika na mba mandehandeha. Amin'ny tapaky ny volana Novambra, hankalaza ny fetibe Eid ny Miozolomana Ejypsiana.
Hita ao amin'ny fampahalalam-baovaon'ny olom-pirenena nandritra ny taona maromaro tany Egypta ny lohahevitra fanorisorenana ara-pananahana. Tamin'ny taona 2006, bilaogera maromaro no namoaka horonantsary momba ny fanorisorenana ara-nofo miseho eny an-dalambe, izay nitarika ny fifantohan'ny fampahalalam-baovao. Taty aoriana tamin'ny taona 2009, Facebook no sehatra fanentanana mitaky ny Androm-pirenena ho fanoherana ny fanorisorenana ara-nofo any Ejipta.
Nitatitra ny vokatry ny fikarohana [.pdf] notarihan'ny Vaomieran'ny Mponina ihany koa ilay bilaogera, nahita ny fikarohana fa 80% amin'ireo lehilahy ao Ejipta (25 ka hatramin'ny 29 taona) no mihevitra fa ny vehivavy iharan'ny fanorisorenana ara-nofo ihany no tompon'andraikitra amin'izany, ka tokony manao fitafiana maotina kokoa izy ireo. Amin'izao andro izao, manao saron-doha ny ankamaroan'ireo tovovavy, na dia tsy misy fahasamihafana aza raha mikasika ny fanorisorenana ara-nofo eny an-dalambe. Nampiseho ny fikarohana tamin'ny taona 2008 nataon'ny Foibe Ejypsiana misahana ny Zon'ny Vehivavy fa 83 isan-jaton'ny vehivavy Ejipsiana no nitatitra ho niharan'ny fanorisorenana ara-nofo.
Mihamaro ny tanora manohitra ity fanorisorenana ity, eny fa na dia ny ankizivavy tsy mitafy “maotina” aza. Manana mpikambana 3000 mahery ny vondrona Facebook iray antsoina hoe “Tsy hanao voaly aho, ary hitondra-tena ianao!”, ary manana mpikambana maherin'ny 1000 ny vondrona iray hafa antsoina hoe: “Inona no tombontsoa azonao amin'ny fanorisorenana vehivavy?.
Manazava lalina kokoa amin'ny fomba fijerin'ny vehivavy ity fanorisorenana ara-nofo ity ny Freedom Fighter, ka nijery antontanisa izay manasongadina fa ny 3% amin'ny vehivavy ihany no mitatitra any amin'ny polisy rehefa iharan'ny fanorisorenana. Nahatsiaro ny tantaran'i Noha Roshdy izay niharan'ny herisetra ara-nofo izy, ary nanapa-kevitra hotoriany ilay mpiherisetra ka niafara tany an-tranomaizina nandritra ny telo taona. Ity no heverina fa fitsarana voalohany manan-tantara momba izany ao Ejipta:
Noha Roshdy no vehivavy voalohany nitory mpiherisetra ara-nofo, tsaroanao fa olona maro no nitsara azy satria tsy nanao saron-doha izy, ary nolazaina tao amin'ny paositry ny polisy izy mba tsy hanala baraka ny tenany amin'ny fitaterana ny fanorisorenana, saingy natanjaka noho ireo rehetra tao izy ary nahazo ny zony.
Farany, manana fanantenana ity bilaogera ity, satria nihaona tamin'ireo Ejiptiana sasany izay tsy manaiky ity fanamarinana ny fanorisorenana ara-nofo ity izy, sy ireo mpikatroka izay niezaka nanasongadina ny sazy ho an'ny mpanorisory. Vao haingana, natomboka ny tetikasa iray hanampy amin'ny fandraketana an-tsarintany ny fanorisorenana ara-nofo ao Ejypta, izay ho atao amin'ny alàlan'ny finday.
3 ora izayAzia Atsinanana